၁။ ဦးသိန်းထွန်း+ဒေါ်မွှေးမွှေး ၁
၂။ ကိုရဲထွန်းအောင်+မအေးကေခင် ၁
၃။ မင်းမင်းခိုင် + Gao Nguyen ၁
၄။ ဒေါ်သန်းဆွေ ၁
၅။ ဦး‌အောင်ကျော်စိုး+ဒေါ်နီနီဆွေ သမီးChristina Soe, သား Alex Soe ၂
၆။ ကိုဘုန်းတေဇာစိုး ၃
၇။ ဦးစန်းတင်အောင် မိသားစု, FL ၁
၈။ ဦးခင်နု+ဒေါ်ခင်ဝင်း မိသားစု ၁
၉။ ဦးကျင်သိန်း+ဒေါ်ခင်ယုဝေ မိသားစု ၁
၁၀။ ပိုလီယန် + ရှယ်လီဝင်းမိသားစု ၁
၁၁။ Luke and Felicia Guieb 1
၁၂။ ဒေါ်ခင်မြဇံ ၁
၁၃။ ကိုကျော်ကျော် ၁
၁၄။ ဦးမော်ကြီး+ဒေါခိုင်ခိုင်စိန် ၂
၁၅။ ဦးကျော်အောင်+ဒေါ်ခင်မေဌေး ၁
၁၆။ ဒေါက်တာ မျိုးသစ်လွင် မိသားစု ၁
၁၇။ ဦးစောကြည် မိသားစု ၃
၁၈။ နယ်လီတန် မိသားစု ၂
၁၉။ ကိုအောင်လင်း မိသားစု ၁
၂၀။ ကိုသိန်းဆွေ+မဥမ္မာမောင် မိသားစု ၁
၂၁။ ဦးကျော်ငြိမ်းအားရည်စူး၍ ဒေါ်လှလှဝင်းမိသားစု ၁
၂၂။ Gregory Law + မအေးသီတာခိုင် မိသားစု ၂
၂၃။ Alex & Anna Chang family 1
၂၄။ ဦးမြသောင်း+ဒေါ်မိမိအေး မိသားစု ၁
၂၅။ Brian & Susan Ho family 1
၂၆။ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်း+မမေကြည်မိသားစု ၁
၂၇။ ကိုမိုးကျော်+မစုစုမွန် မိသားစု ၁
၂၈။ ဒေါ်ကျင်မြင့်မိသားစု ၁
၂၉။ ဦးသောင်းစိန်+ဒေါ်သောင်းရီမိသားစု ၁
၃၀။ Robert & Su maw Chang 1
၃၁။ ဗိုလ်ရွှေ + မဝိုင်းချန် ၁
၃၂။ ဒေါက်တာ စိန်ဝင်း + Priscilla Win ၁
၃၃။ ဒေါက်တာစန္ဒာဝင်း ၁
၃၄။ May Cherry Lee 2
35. Steve and Stacy Chen family 1
36. Sanda & Yin Loung family 1
37. Daw Khin San Myint 1
38. IMO Daw Shu Lwan, by Than Tun Chin family 1
39. Kwong Ngoon Tham & San Kain Chin family 1
၄၀။ ဒေါ်ခင်ခင်လှ မိသားစု ၁
၄၁။ ကိုချစ်ဇော် + မတူးတူး ၁
၄၂။ ကိုဌေးသိန်း+မရင်ရင် မိသားစု ၁
၄၃။ Hilde Chee & ကိုတင်မောင်အေး မိသားစု ၁
၄၄။ ဦးလှထွန်းမိသားစု ၁
၄၅။ ဦးကျော်ရင်+‌ဒေါ်လုံးခင် မိသားစု ၂
၄၆။ Winkle & Vivian family 2
47. David & Mandy Sihe family 1
၄၈။ ဘောဘီကောအား ရည်စူး၍ ဒေါ်လှိုင်ဟန်နှင့် သမီး Patricai Ho family 1
၄၉။ ဘောဘီကောအား ရည်စူး၍ ဒေါ်လှိုင်ဟန်နှင့် သား Albert Kaw 1
၅၀။ ဦးကြင်+ဒေါ်ဝင်းဝင်း မိသားစု ၁
၅၁။ မိခင်ကြီးဒေါ်စိန်နှင့်မိသားစု ၃
၅၂။ ဦးကိုကိုလေး + ဒေါ်သိင်္ဂီလှဖေ မိသားစု ၁
၅၃။ Ned Duckin family ၁
၅၄။ ဦးဖေခင်+ဒေါ်ခင်စိန် မိသားစု ၁
၅၅။ ဦးကျော်ကျော်+ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း မိသားစု ၁
၅၆။ ဒေါက်တာ ရွှေစင်၊ မစုယမင်းမိသားစု ၁
၅၇။ ကိုကျော်ကျော်လင်း + မတင်တင်မိုး မိသားစု ၁
၅၈။ Hui Nung Cheng & Pao Chu Cheng Yen family 1
59. Patrick Kao, Katherine Cheng fimily 1
60. Zu Cheng Chen & Mei Yi Cheng family 1
၆၁။ ဒေါ်နီနီမာ မိသားစု ၃
၆၂။ ကိုအေးမင်း + မနုယဉ်ထွေး မိသားစု ၁
၆၃။ ကိုအောင်ကျော်ဝင်း + မအေမီ မိသားစု ၁
၆၄။ ဦးမြင့်လှိုင် + ‌ဒေါ်တင်တင်ရီ မိသားစု ၁
၆၅။ ဦး‌ရွှေစိုင်း + ဒေါ်ဝင်းဝင်းလှိုင် မိသားစု ၁
၆၆။ Shawn & Angelica Chen family 1
၆၇။ ဦးလင်ချီယု+ဒေါ်ကျင်အေးတို့ကို ရည်စူး၍ သမီး ဒေါ်ရီရီဝင်း မိသားစု ၁
၆၈။ မမွန်နန္ဒာမျိုး မိသားစု ၁
၆၉။ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြ ၁
၇၀။ Brian & Emily Chan family 1
၇၂။ ဒေါက်တာ စိန်မြင့် + ဒေါက်တာစိုးစိုးမော် မိသားစု ၃
၇၃။ မလှလှ ၂
၇၄။ ဦးကျော်လှိုင်+ဒေါ်စိုးစိုးလွင်မိသားစု ၂
၇၅။ ဦးတက်တိုး မိသားစု ၂
၇၆။ မိဘများအမှုးထား၍ မကေသွယ်ခိုင် ၁
၇၇။ ဒေါ်ငွေကြည် ၁
78. John & Ma Toni family 1
၇၉။ ကိုသော်ဇင်+ Rosie Zin family 3
၈၀။ ဒေါက်တာစိန်စိန်အေး မိသားစု ၁
၈၁။ Jeffrey & Eileen Chen family ၂
၈၂။ ဦးရဲဆင့် + ဒေါ်နုနုရီ မိသားစု ၁
၈၃။ ဦးကြည်တိုး + ဒေါ်သန်းငြိမ်း မိသားစု ၄
၈၄။ မအေမီ မိသားစု ၂
၈၅။ ဦးထွန်းအောင် + ဒေါ်ခင်မာဝင်း မိသားစု ၂
၈၆။ ကိုအောင်တင့်လွင် + မစံစံထွန်း မိသားစု ၂
၈၇။ ကိုကျော်စွာသိန်း + မအေးအေးမာ မိသားစု ၁
၈၈။ ကိုနန္ဒလင်းလှိုင် + မနွယ်မာဝင်း မိသားစု ၁
၈၉။ ကိုဇော်ဇော်အောင် + မဖြိုးစန္ဒီအောင် မိသားစု ၁
၉၀။ ကိုပြည့်ဖြိုးအောင် + မသွင်နီလာအောင် မိသားစု ၂
၉၁။ ဦးသိန်းအောင် + ဒေါ်စိုးတင့်မိသားစု ၂
၉၂။ ဦးလှသိန်းမောင် + ဒေါ်သွယ်သွယ်ဝင်း ၃
၉၃။ ဦးထွန်းကြည်+ဒေါ်ခင်မမ မိသားစု ၁
၉၄။ မိဘများအား အမှုးထား၍ ကိုတင်ထွန်း+မစန်းစန်းမိသားစု ၂
၉၅။ ဦးအောင်သန်း+ဒေါ်သိန်းလှ မိသားစု ၁
၉၆။ ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး တန်ရီမိန်းအားရည်စူး၍ ဒေါ်အိုက်ဝှါတင် မိသားစု ၆
၉၇။ ဦးမျိုးမင်း + ဒေါ်တင်တင်ဆွေ မိသားစု ၁
၉၈။ မိဘနှစ်ပါးဖြစ်သော ဦးကောင်+ဒေါ်ကျင်နွဲ့ကို ရည်စူး၍ David Hoe ၃
၉၉။ နှစ်ဖက်မိဘများအား ရည်စူး၍ Jerry & Sing Sing Wong 2
100. Charles Calhoun & Ma Khin Myint 1
၁၀၁။ Aye Aye Khine Hackett ၁
၁၀၂။ ကိုကျော်စိုးဟန် + မအိမွန်ပြုံး မိသားစု ၁
၁၀၃။ ကိုညီညီလှိုင် + မသင်းသင်းနိုင် ၁
၁၀၄။ ကိုကျော်ကျော်ထွန်း + မဝေဝေ မိသားစု ၁
၁၀၅။ ကိုထွန်းထွန်း+မမြင့်မြင့်ခိုင် မိသားစု ၁
၁၀၆။ မိဘများဖြစ်သော ဦးလျူဟန်ချောင်း+ဒေါ်တန်တန်ကက်နှင့်, လင်ကျိုတီတို့အား ရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်စောယု မိသားစု ၁
၁၀၇။ ဦးမြင့်လွင်အား ရည်စူး၍ ဒေါ်တင်မြင့် မိသားစု ၁
၁၀၉။ ဓမ္မရိပ်နှင့် ဆွေမျိုးများ ၁
၁၁၀။ မိဘများဖြစ်သော ဦးခင်မောင်+ဒေါ်ခင်မာယဉ်တို့အား ရည်စူး၍ သားသမီးများမှ ၁
၁၁၁။ ကိုဥက္ကာထွန်း+မနွယ်နီလင်း ၁
၁၁၂။ Lawrance Tan ကို ရည်စူး၍ နယ်လီတန်မိသားစု ၂
၁၁၃။ စောကြည်မိသားစု ၃
၁၁၄။ ဒေါက်တာ မျိုးသစ်လွင်+ဒေါက်တာ မဉ္ဇူအောင်မိသားစု ၁
၁၁၅။ ဒေါက်တာ စိုးဝင်း+ဒေါက်တာ သီသီသိန်း မိသားစု ၂
၁၁၆။ ဒေါက်တာ မင်းမင်းလှိုင် + ဒေါ်အိသန္တာစိုး မိသားစု ၂
၁၁၇။ ကိုမင်းမင်းဖြိုး+ မဝေဖြိုးသီ ၂
၁၁၈။ ကိုမျိုးကျော်မြင့် + မဥမ္မာဝင်းမိသားစု ၁
၁၁၉။ ဦးရွှေကျော်အားရည်စူး၍ ဒေါ်ခင်တိုးမြင့် မိသားစု ၁
၁၂၀။ မိခင်ဒေါ်လွင်လွင်အေးအမှုးထား၍ ကိုအောင်ဝင်း+မစန္ဒာဝင်း ၁
၁၂၁။ Drs. Lin Naing & Natalie Htet family, ဦးကျော်ဝင်း+ဒေါ်စိုးစိုးဝင်းမိသားစု ၃
၁၂၂။ ကိုကျော်ဇင်ထက် + မနွယ်နွယ်အောင် မိသားစု ၂
၁၂၃။ ဦးအောင်ကျော် + ဒေါ်သန်းသန်းဌေး မိသားစု ၃
၁၂၄။ ဒေါ်မြငြိမ်း ၁
၁၂၅။ ဦးတင်ထွန်း + ဒေါ်စန်းစန်းဦးမိသားစု ၂
၁၂၆။ Yee & May Chow ၁
၁၂၇။ ဦးတင်မောင်လွင်+ဒေါ်တင်တင်ဝင်းမိသားစု ၂
၁၂၈။ Ryan & Audrey Lim family ၁
၁၂၉။ Chan Chin Choo and family ၁
၁၃၀။ ဦးသိန်းလွင်မိသားစု ၂
၁၃၁။ Tony Lo 1
၁၃၂။ ဖခင်ကြီးကို ရည်စူး၍ မမဉ္ဇူနွယ် ၇
၁၃၃။ ‌ဒေါ်နှင်းယုလွင်နှင့် သားသမီးမြေး မိသားစု ၁
၁၃၄။ ဒေါ်ကြည်ကြည်အေးနှင့် မောင်နှမများ ၁
၁၃၅။ မခင်အေးရင် ၁
၁၃၆။ ‌ဒေါ်မိခင်ခင်စိုး, သား ဇေယျဟန်း, သမီး Rachel Myaing, တူမ သိင်္ဂီရိဂျီ ၄
၁၃၇။ Christine and Jason Chan family 1 138. Sandar Chan and Wilson Chan - from Hilo, Hawaii 1 set of robe